(Daawo) MW. Saciid Dani oo eedeyntii ugu cusleyd u jeediyay DF - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka (Daawo) MW. Saciid Dani oo eedeyntii ugu cusleyd u jeediyay DF
(Daawo) MW. Saciid Dani oo eedeyntii ugu cusleyd u jeediyay DF
MW Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo wareysi siiyay idaacadda BBC ayaa sheegay in dilkii Guddoomihii hore ee gobolka Banaadir Eng. Yariiso uu mugdi badan ku jiro isla markaana kooxda Shabab ay noqdeen kuwa loo adeegsado dilalka qorsheysan iyagana ay iska sheegtaan balse ay adeegsadeen qaar ka mid ah madaxda DF isagoo sheegay in caalamka uu shaki badan ka qabo xiriirka ka dhexeeya Dowladda Federaalka iyo kooxda Shabab.
MW Deni aya sidoo kale carabka ku dhuftay in muddo ka yar laba bilood dilka laba Guddoomiye gobol oo ka tirsan Puntland ay baaritaan ku wadaan isla markaana ay Puntland qabto shaki ah in Shabab uusan ku ekeyn dilkooda, uu sidaas oo kale uu shaki badan ka qabaan in Shabab loo adeegsanayo sidii loo wiiqi lahaa maamulka Puntland.
Cidka kasta oo isku dayeeysa in ay carqaleeyso degenaanshaha iyo kala danbeynta ka jirta Puntland waxaa uu sheegay in aay yihiin cadow Soomaaliyeed iyo mid Puntland ah waxaana uu hoosta ka xariiqay in ay ka gungaari doonaan tallaabana laga qaadi doono.
Mar uu ka hadlaayay qaab dhismeedka dowladnimada, ayaa MW Deni waxaa uu sheegay in la rabo in la wiiqo nidaamka dowladnino iyo in la baab’iyo Federaalka, wuxuuna sheegay in. cidda ka danbeysa ee isku dayeeysa in ay wiiqdo dowlaninada iyo kala danbeyntaba ay tahay dowladda federaalka ah.
Mar uu ka hadlaayay doorashooyinka ayaa MW Deni uu hoosta ka xariiqay in doorashada aay ku dhacdo wakhtigeeda isla markaana ay go’aan ka gaarista ay wada leeyihiin Dowladda Federaalka ah, Dowladda Goboleedyada iyo Saamileyda siyaasadeed.
MW Deni ayaa sheegay in Dowladda Federaalka ay diidan tahay in ay heshiiyaan Dowladda Federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah, wuxuuna ku eedeeyay in maamulka Farmaajo uu aaninsan yahay in dagaal kala hortago qof walba oo ka ra’ayi duwan, wuxuuna sheegay in haddii wax yar oo is afgarad xumo ah ay dhex marto Dowladda Federaalka iyo Beesha Caalamka lala dhacaayo hoobiyaal xerada Xalane. Wuxuu intaa ku daray in ay ogyihiin wax badan balse aay isku dayayeen in aay si hoose wax ku xeeriyaan laguna xalliyo balse hadda ay gaartay meeshii ugu hooseysay.
Wuxuu intaa ku daray in Soomaaliya ay hadda ku socoto meel halis ah loona baahan yahay in si wadajir ah looga hortago nidaamka kalatalisnimo ee Muqdisho ka jira isla markaana si degdeg ah la isaga yimaado sidii loo badbaadin ahaa Soomaaliya. i
Halka Hoose ka daawo wareysiga MW Saciid Deni ee BBC
Previous articleMadaxweynaha Puntland oo magacabay wasiir iyo wasiir kuxigeeno
Next articleQaybo badan oo ka mida Soomaaliya oo maanta laga ciiday